गुगलमा पहिलो श्रेणीकरण कसरी पाउने - फ्र्यागी विज्ञापनहरू
लगभग सबै जो SEO को महत्व जान्दछन् गुगलमा उनीहरूको वेबसाइट पृष्ठ र्याक बढाउन अति नै व्याकुल छन्। सबैजना यसलाई प्राप्त गर्न उत्तम र सब भन्दा चाँडो मार्ग खोज्न व्यस्त छन्। किन? किनभने हामीले SEO बारे हाम्रो लेखमा उल्लेख गर्यौं। कुरा तपाईंको वेबसाइट ट्राफिक कसरी बढाउने भन्ने छ।
इन्फ्रन्ट द्वारा गरिएको एक अध्ययन वेबवर्क्स Google खोज परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा वेबसाइटले ट्राफिकको वेबसाइटको 95%% प्राप्त गरेको देखाउँदछ, जबकि अर्को पृष्ठले मात्र%% ट्राफिक वेबसाइटहरू प्राप्त गर्दछ।
जब तपाईं गुगल जस्तो सॉर्टी machine मेसिनको लागि खोजी परिणामहरूको मुख्य पृष्ठमा हुनुहुन्छ, तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गरिसकेको हुन्छ र समीक्षा धेरै ठूलो हुन्छ। किनभने खोजी परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा कसैको वेबसाइट पहुँच गर्ने सम्भावना धेरै नै ठूलो छ।
मानिसहरूले देख्नेछन् कि कुन उत्पाद र सेवाहरू तपाईं प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, वा तपाईंले देख्नु भएको कामहरू। त्यहाँबाट सुरू गरेर, तपाईं उत्पादनहरू र सेवाहरू किन्नुहोस् वा भाँडामा लिनको लागि ठूलो अवसर पाउनुहुनेछ, वा त्यसका कार्यहरूबारे छलफल वा पदोन्नती गरिन्छ। यो सफलता वा लोकप्रियता को लागी तपाइँको स्थिति तल एक कदम देखिन्छ यदि तपाइँ यसलाई आशा गर्नुहुन्छ भने।
हो, वास्तवमा परिणामहरू तपाईं एकै पल्टमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यदि त्यहाँका लागि सुरक्षित मार्गहरू छन् भने हामी तपाईंलाई निश्चित रूपमा दिन्छौं। जहाँसम्म, निम्नलिखित पूर्ण गाईडका साथ हामी चरण पछि चरण दिनेछौं, तपाईं तुरुन्तै यसको माथि हुन सक्नुहुनेछ। खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ (SERP)।
चरणहरु Google मा पहिलो रैंकिंग प्राप्त
गुगलमा वेबसाईटहरू बढाउने तरिकाहरूका लागि यात्रा गर्न आवश्यक यी चरणहरू छन्। तपाईंले यसलाई एक एक गरेर इन्कार गर्न आवश्यक छ ताकि तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त होस्।
पृष्ठ रैंक डिटर्मिनेन्ट एल्गोरिथ्म थाहा पाउनुहोस्
Google ले आफैलाई सुधार गर्न जारी राख्दछ ताकि चलिरहेको मेसिनले थप सही खोजीहरू उत्पादन गर्न सक्दछ। MOZ द्वारा अगाडि राखिएको डाटाका अनुसार, त्यहाँ प्रत्येक वर्ष गुगलले 500००--600०० अपडेटहरू वा परिवर्तनहरू गर्दछ।
यो प्रकोप इञ्जिन एल्गोरिथ्मले निर्धारित गर्दछ कि तपाईंको वेबसाइट गुगल खोजी परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा सिफारिस गर्न योग्य छ वा छैन। यो एल्गोरिथ्म तपाईंको वेबसाइटको भाग्यको निर्धारक हो। त्यसोभए तपाईंले यो जान्नु आवश्यक छ कि यस प्रणालीले कसरी काम गर्दछ र यसको अर्थ तपाईंको वेबसाइटमा के हुन्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने के गर्न आवश्यक छ र टाढिनु पर्छ ताकि तपाईंको वेबसाइट गुगलको पहिलो श्रेणीकरणमा हो?
तपाईको गुगलको परिवर्तनसँग के गर्नुपर्दछ भन्नेमा कुनै पूर्ण विस्तृत वा स्पष्ट उत्तर छैन। गुगलले सँधै अपडेट गरिरहन्छ के उसले गरिरहेको छ, तर कसरी यो नयाँ एल्गोरिथ्म तरिकाको विवरण को एक एसईओ विशेषज्ञ को लागी एक सानो रहस्यमय काम गर्दछ को विवरण।
तपाईंलाई सल्लाह दिन खोजेको विज्ञको विचारहरू, वास्तवमा केवल अटकलको रूपमा। त्यसो भए, यदि यो विशेषज्ञहरू भन्छन् कि उनीहरूको obstacles०% अवरोधहरू एल्गोरिथ्म कारकहरू परिवर्तन गरेर आएको हो भने यो एकदमै उचित हो।
तर तर्क, यदि सबैलाई पक्का छ कि कसरी पक्का र खोजी पृष्ठको शीर्ष तिर तत्काल हुने बारे थाहा छ, गुगल निश्चित रूपले निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ कुन वेबसाइट वा पृष्ठहरू सबैभन्दा सही खोज परिणामको रूपमा घोषित गर्न सकिन्छ। त्यसोभए तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? मोनिटर Google एल्गोरिदमको अद्यावधिक सम्बन्धित जानकारी जारी छ।
तर चिन्ता नलिनुहोस्, हामीले प्रदान गर्ने अर्को चरणहरू चरणहरू हुन् जुन तपाईंको वेबसाइटको सफलतामा गुगलमा पहिलो स्तर निर्धारण गर्नमा प्रभाव पार्छन्। अधिक महत्त्वपूर्ण चीजहरू यी चरणहरू हुन् 100% सुरक्षित, तपाईं जरिवानाको अधीनमा हुनुहुने छैन।
तपाईंको पृष्ठ श्रेणी मूल्या rank्कन गर्नुहोस्
SERP मा तपाइँको वेबसाइट र्याक सुधार गर्न, तपाइँले यसलाई समीक्षा गर्नु पर्छ अघि बढ्नु अघि तपाइँको वेबसाइटमा प्रगति हुनु अघि। यो तपाइँको वेबसाइटमा लागू हुन्छ जुन भर्खर निर्माण गरिएको छ वा थोरै पोष्टहरू छ।
त्यहाँ एक उपकरण छ जुन तपाइँले तपाइँको वेबसाइटको प्रगति समीक्षा परिणाम खोज्न को लागी SERPs को बारे मा समीक्षा गर्न सहयोग गर्न सक्छ। यदि तपाइँ तपाइँको पृष्ठ मा सामग्री मा एक विशिष्ट कीवर्ड लक्षित गर्न चाहानुहुन्छ भने, यो उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं भर्खर एउटा निर्दिष्ट कुञ्जी शब्द प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईंको वेबसाइट डोमेन प्रविष्ट गर्नुहोस्, तपाईंको क्षेत्र छनौट गर्नुहोस्, त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् गो! परिणामहरू तपाईंको स्क्रीनमा सिधा देखा पर्नेछ। यहाँ केहि आईटमहरू छन् जुन परिणाम पृष्ठ कुञ्जीशब्द रैank्क परीक्षकमा देखा पर्नेछ!
तपाईंको वेबसाइट SERP मा क्रमित गर्नुहोस्
तपाइँको साइट मा पहिलो पृष्ठ एक खोज सम्बन्धित शीर्षक मा प्रकट होता है
तपाईंको सामग्रीसँग सम्बन्धित खोजीहरूको संख्या
कुञ्जी शब्दमा क्लिक प्रति लागत लागत Google उत्पादन भुक्तान गर्दा AdWords हो
पढ्नुहोस् कसरी सजिलै वेबसाइटको गति बढाउने
SERP मा तपाइँको वेबसाइट रैंकिंग सेवाहरूको लागि उपकरणहरूको प्रयोगको अतिरिक्त, तपाइँ तपाइँको पृष्ठ लोड पृष्ठ पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। किन? किनभने लोडि page पृष्ठको गति आधिकारिक रूपमा गुगलले रैंकिंग कारकहरू मध्ये एकको रूपमा घोषणा गरेको छ।
यदि तपाइँको वेबसाइटले बिस्तारै स्क्रिनमा अक्षुण्ण प्रदर्शन प्रदर्शन गर्दछ भने, रूपान्तरण दर प्राप्त गर्ने तपाइँको मौका पनि बिग्रिनेछ। विशेष गरी सर्वेक्षणको अनुसार, कोही पनि धैर्यतासाथ पृष्ठको प्रतिक्षा गर्दै थिए जुन तिनीहरू लामो समयदेखि लोड भइरहेको थियो।
गुगलबाट भ्रमण गर्ने व्यक्ति निश्चित रूपमा पृष्ठको लागि समय खेर फाल्न चाहँदैनन् जुन समाधान वा चाँडै सन्दर्भ दिदैन। तिनीहरू तपाइँको वेबसाइटबाट बाहिर आउँछन् र Google द्वारा अन्य सुझाव गरिएका वेबसाइटहरूमा जान्छन्।
नोट, यदि यो हुन्छ भने, कसरी अधिकतम एसईओ व्यवसाय, मेटा विवरण, वा शीर्षक ट्याग तपाईंको वेबसाइट एक गुगल दण्ड द्वारा हिट हुनेछ। गुगलले पृष्ठलाई दण्ड दिन्छ जुन आगन्तुकहरू द्वारा धेरै परित्याग गरिएको छ (सेकेन्ड भन्दा कम, आगन्तुकहरू तपाईंको पृष्ठ वेबसाइटबाट बाहिर आउँछन्)।
यसैले तपाईंको लोडिंग पृष्ठको गति परीक्षण गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ धेरै चाखलाग्दो र नि: शुल्क उपकरणहरू छन् तपाईंको वेबसाइट लोड गर्ने सिधा परीक्षण गर्न। यहाँ उपकरणहरू छन्!
गुगल पेजस्पिड इनसाइट्स
Pingdom वेबसाइट गति परीक्षण
माथिका सबै उपकरणहरू प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो छ, तपाईं केवल प्रत्येक स्तम्भमा आफ्नो डोमेन प्रविष्ट गर्नुहोस् र परिणाम पृष्ठ तुरून्त प्राप्त गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको पृष्ठको परिणामहरूले तपाईंको लोडिंग गति खराब छ भनेर देखाउँदछ भने, थप कार्यहरू लिई प्रयास गर्नुहोस्।
अर्गानिक ट्राफिकलाई प्राथमिकता दिनुहोस्
कार्बनिक ट्राफिक शब्द तपाईको साइटमा अवस्थित आगन्तुकहरू वा वेब आगन्तुकहरूलाई स: शुल्क भुक्तान (जैविक) को नतिजाको रूपमा प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ। जैविक यातायात सशुल्क ट्राफिकको विपरित हो। जैविक मानिने आगन्तुकहरू ती हुन् जसले गुगल जस्तो सॉर्टि machine मेशीन प्रयोग गरेपछि तपाईंको साइट फेला पारे। यी आगन्तुकहरू अन्य साइटबाट आएका सन्दर्भहरूमा आउँदैनन्।
तपाइँको वेबसाइटको लागि अर्गानिक ट्राफिक बढाउने सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको तपाइँको ब्लगमा नियमित र दिगो गुणवत्तायुक्त सामग्री प्रकाशित गर्नु हो।
गुणस्तरीय सामग्रीको लागि कसरी मापदण्डहरू छन्?
पहिले, तपाईले आफ्नो लेखको प्रासंगिकतामा ध्यान दिन आवश्यक छ विषय वा आलाप जुन तपाइँ छलफल गर्न चाहानुहुन्छ। यो आला पृथ्वीसँग सम्बन्धित छ जुन तपाईं पृथ्वीमा चाहानुहुन्छ। यसको अलावा, त्यहाँ केहि जडानहरू छन् जुन तपाईको मुख्य बजारसँग कुञ्जी शब्दहरू सहि छन् ताकि तपाईंको सामग्री लक्षित हुन र धेरै आगन्तुकहरूलाई आमन्त्रित गर्न सक्दछ।
दोस्रो, तपाइँको वेबसाइट वा पृष्ठ उपस्थिति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँले देख्नको लागि लेखनको प्रदर्शन सजिलो बनाउनु पर्छ। तपाईंको फन्टको प्रकार, आकार र र्गलाई पाठकलाई विचलित नहोस् र त्यस्तै तपाईंको पृष्ठ बाहिर निस्कनुहोस्। यसका साथै समग्र डिजाइन पनि महत्त्वपूर्ण छ, रमाईलो ईन्टरफेस डिजाइन बनाउँछ तर जटिल वा धेरै भीडले भरिएको छैन।
तेस्रो, मल्टिमेडिया सामग्री थप गर्न आवश्यक छ। कसरी पाठकहरूलाई अन्त सम्म तपाईंको सामग्री पढ्न मा रुचि राख्ने बनाउन। तपाईंको सामग्रीमा धेरै ग्राफिक्स, छविहरू, र भिडियोहरू थप्नुहोस्। कथाको लामो र बोरिंग पाठ पढ्दा प्रायः पाठकहरू संतृप्त हुनेछन् (सामान्यतया भाषा धेरै कठोर र धेरै प्राविधिक वा शैक्षिक सर्तहरू हुन्छन्)।
तपाईंको वेबसाइट मोबाइल मैत्री सुनिश्चित गर्नुहोस्
गुगलबाट आधिकारिक डाटाको आधारमा, गुगलमा खोज संख्या ches०% को लेबोह अब मोबाइल उपकरणबाट छ। गुगलले स्पष्ट रूपमा यो पनि भनेको छ कि मोबाइल-मैत्री ग्यारेन्टी नभएको वेबसाइट SERP मा दर्जा दिईंदैन।
त्यसोभए तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ कि तपाइँको वेबसाइट मोबाइल मैत्री भएको छ वा छैन? गुगलको मोबाईल-मैत्री परीक्षण प्रयास गर्नुहोस्। यो उपकरण अनलाइन र नि: शुल्क पहुँच गर्न सकिन्छ। तपाईले आफ्नो वेबसाइट ठेगाना खोजी खोजीमा प्रविष्ट गर्नुभयो। त्यस पछि, तपाईं तुरून्त परिणामहरू देख्न सक्नुहुनेछ। परिणामहरू बुझ्न को लागी धेरै सजिलो हुनेछ किनकि यो मात्र उत्तर हो कि हैन। यस तरीकाले तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईको वेबसाइट अझै मर्मत गरिएको छ वा सजिलैसँग चलेको छ।
यदि तपाइँको वेबसाइट मोबाइल मैत्री को रूप मा घोषित गरीएको छैन भने, हामी निम्न चीजहरु सुझाव दिईन्छ जसले तपाइँलाई यसलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ!
तपाईं यसलाई तुरून्त मोबाइल, विधुर मोबाइल, वा परिचालित मार्फत समाधान गर्न सक्नुहुन्छ
यदि तपाइँको वेबसाइट एक लोकप्रिय CMS प्लेटफर्म मा निर्मित छ, तपाइँ एक WordPress प्लगइन को लागी WPTouch को रूप मा उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। WordPress को अलावा, त्यहाँ ड्रपल को लागी एक विषय कुञ्जी छ वा जुमला को जिम्मेवार।
तपाईंको वेबसाइटले पहिले नै उत्तरदायी वेब डिजाइन (RWD) प्रयोग गरिरहेको छ भनि पुन: प्रयास गर्नुहोस्। यस RWD ले तपाइँ तपाइँको वेबसाइटको उपस्थिति राम्रोसँग वा सबै प्रकारका उपकरणहरूमा ठीकसँग चलेको निश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। प्रत्येक पृष्ठमा टाउकोमा मेटा दृश्य ट्याग थप्नुहोस् ब्राउजरलाई बताउन यदि पृष्ठ समायोजन वा प्रत्येक उपकरणमा अनुकूलन हुनेछ।
पढ्नुहोस् SEO भिडियो (र्‍यांक भिडियोको लागि 8 सुझावहरू)
कीवर्ड रिसर्च गर्नुहोस्
तपाइँको कुञ्जीशब्दहरूमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नु भनेको तपाइँ सामग्री बनाउनु अघि मुख्य चरण हुनुपर्दछ। तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि तपाइँको आला बजार द्वारा कुन दिन खोजशब्दहरू खोजी गरिन्छ र प्रयोग गरिन्छ।
प्रभावकारी हुनको लागि तपाई उपयोगी र निःशुल्क उपकरणहरू जस्तै गुगल किवर्ड प्लानर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यस गुगल कुञ्जीशब्द योजनाकारको माध्यमबाट, तपाईं आफ्नो अडी वा विभाजनको बारेमा र तपाईंको आला मार्केटमा सम्बन्धित कुञ्जी शव्दहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे बढी जान्न सक्नुहुन्छ।
लि link्क सहि निर्माण गर्नुहोस्
त्यहाँ दुई प्रकारका लिंकहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् आन्तरिक लिंकहरू र बाह्य लिंकहरू। प्राकृतिक प्लेसमेन्टको साथ यी दुई लिंकहरू समावेश गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
आन्तरिक लि links्कहरू लिंक हुन् जुन तपाईंको वेबसाइटबाट पृष्ठमा जान्छन्। जबकि बाह्य लिंकहरू लिंकहरू हुन् जुन अन्य वेबसाईटहरूबाट पृष्ठहरूमा जान्छन्।
हामी न्यूनतम internal आन्तरिक नम्बर वा बाह्य लिंकहरूको सिफारिश गर्दछौं जुन तपाईं आफ्नो सामग्रीमा पाठमा लि .्क गर्नुहुन्छ। अधिक र अधिक, राम्रो। यसले गुगललाई यो जान्न मद्दत गर्दछ कि तपाईंको सामग्री व्यापक छ किनकि यो आन्तरिक लिंकसँग सम्बन्धित छ, यसले तपाईंको अधिकारको बलियो डोमेनलाई संकेत गर्दछ।
तपाइँ तपाइँको कुञ्जी शव्दलाई एch्कर पाठको रूपमा लक्षित गर्न सक्नुहुन्छ तर यसलाई सुरक्षित रूपमा Google को दण्डबाट बच्न यसलाई सामान्य कुञ्जी शब्दहरूको साथ मिलाउन प्रयास गर्नुहोस्।
उदाहरण को लागी, तपाईको प्राथमिक कुञ्जी शव्द "सबै भन्दा राम्रो DSLR समीक्षा" हो, तब एक प्राकृतिक लिंक बनाउनुहोस् "" DSLR को लागी एक राम्रो समीक्षा "।
अन्तमा, तपाईंको पछिल्लो सामग्री वा पोष्ट समीक्षा गर्न प्रयास गर्नुहोस् र विषालु लिंक हटाउनुहोस्।
विषाक्त लिंक के मतलब तपाइँको वेबसाइट को लागी नराम्रो लिंक हो। गरीब लि Ex्क उदाहरणहरू गैर प्राकृतिक लिंकहरू, लि visitors्कहरू जसले आगन्तुकहरूलाई धोका दिन्छन्, पृष्ठसँग सम्बन्धित लिंकहरू जुन अप्रासंगिक वा कम गुणस्तरको हुन्छ।
फेरि, यो जान्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कुन लिंक तपाईंको साइटको लागि खतरनाक छ त्यसैले तपाईं यसलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ। गुगल पेन्गुइन २.० ले कम श्रेणीको स्पष्ट श्रेणीमा पहिचान गर्न सजिलो बनाउँदछ। यहाँ मापदण्डहरू छन्!
PR-n वा PR0 साइटहरूसँग सम्बन्धित
प्राय: साइटव्यापी लिंकहरू
कम ट्राफिक वेबसाइटहरू भएका साइटहरूसँग सम्बन्धित
उही आईपी ठेगानासँग सम्बन्धित
वेब पृष्ठहरूमा सम्बन्धित जुनसँग धेरै बाह्य लिंकहरू छन्
त्यहाँ धेरै निःशुल्क उपकरणहरू छन् तपाईलाई अस्वस्थ रूपमा वा पहिलेका लिंकहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न जुन हामी टोक्सिक लिंक भन्छौं। दुई उपकरणहरू जुन हामी तपाइँलाई तपाइँको लि will्क प्रबन्ध गर्न सिफारिश गर्दछौं बैकलिंक्स र लिक्विडेटर मोनिटर हो। LinkQuidator सँग अस्वास्थ्यकर लिंकहरू कसरी जाँच गर्ने भन्ने बारे यहाँ छ!
तपाईंलाई केवल धेरै साधारण कार्यहरू आवश्यक पर्दछ, अर्थात् उपलब्ध यूआरएलमा उपलब्ध युआरएल प्रविष्ट गर्नुहोस् त्यसपछि "खोजी" क्लिक गर्नुहोस्। पृष्ठ नतिजा तपाईंको स्क्रीनमा तुरून्त देखा पर्नेछ। यो उपकरण नि: शुल्क प्रदान गरिएको छ।
जब तपाईं स्प्याम समावेश भएको लिंक भेट्टाउनुहुन्छ वा विषालु लिंकको रूपमा जुन तपाईंको वेब पृष्ठमा जान्छ, पोष्टलाई मेटाउन हतार नगर्नुहोस्। यो लिंक हो जुन तपाईंले मेटाउनुपर्दछ त्यसैले खोज एल्गोरिथ्मले तपाईंलाई जरिवाना प्रदान गर्दैन। त्यसोभए, पोष्ट वा मेटाइएको सामग्री हैन तर अवस्थित लिंकहरू तपाईंको सामग्रीबाट हटाउन आवश्यक छ।
यस लेखको माध्यमबाट, हामी तपाईंलाई चरण-देखि चरणमा मार्गनिर्देशन गर्दछौं ताकि तपाईंको वेबसाइट गुगल खोजी ईन्जिनमा पहिलो स्थानमा पुग्न सक्दछ। SERP मा उसको वेबसाइटलाई पहिलो स्थानमा राख्ने को चाँहि छैन? अवश्य पनि, तपाइँ यसलाई पनि चाहानुहुन्छ किनकि यस तरीकाले तपाईको वेबसाइट वा पृष्ठ धेरै प्रयोगकर्ता वा आगन्तुकहरू द्वारा पहुँच गर्न सकिन्छ।
यो प्रयास एसईओ प्रक्रियासँग धेरै नजिकबाट सम्बन्धित छ। हामी जहिले पनि हाम्रो अघिल्लो SEO लेखमा व्यक्त गर्दछौं, तपाईले अपेक्षा गरेको नतीजाहरू राती सम्म सफल हुँदैनन्।
तपाईं एक वेबसाइट व्यवस्थापक हुन आवश्यक छ जुन धेरै अर्थ, समर्पित र रचनात्मक हो। यो परिवर्तन वा नवीकरणबाट प्रभावित हुन्छ जुन गुगलले यसको खोज एल्गोरिथ्मको सम्बन्धमा लगातार गरिन्छ।
वास्तवमा गुगल पेज को पहिलो स्थिति मा हुन को लागी कुनै त्वरित तरीका छैन तर तपाईं अब यो शुरू गर्न सक्नुहुनेछ। शुभकामना, शुभकामना!
»गुगल एड्सेन्स र कसरी तपाईंको खाता अनुरोध स्वीकार गरिनेछ
Advance अग्रिम तपाईंको व्यवसाय को लागी स्थानीय SEO मा पूर्ण गाईड